इन्स्टामा एउटै पोस्टबाट ११ करोड ! – Saurahaonline.com
इन्स्टामा एउटै पोस्टबाट ११ करोड !
काठमाडौँ २२ बैशाख । चर्चित मोडल तथा रियालिटी टिभी स्टार किम कार्दसियनले इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट गरेबापत करौडौँ रकम कमाउने गरेकी छन्।
एक वेभसाइटका अनुसार किमले अनुमतिविना आफ्नो फोटोको गलत प्रयोग गरेको भन्दै एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लागेकी छन्। उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएपछि ५० लाख डलर (५५ करोड नेपाली रुपैयाँ) क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दर्ता लागेकी हुन्।